Bhanga guru mukukweretesa vanhu nemakambani munyika, reCommercial Bank of Zimbabwe, kana kuti CBZ, rinonzi riri kunetsekana kuwana mari yarakakweretesa vanhu, zvikuru nhengo dze Zanu-PF, idzo dziri kutadza kubhadhara chikwereti.
Muna 2015, bhanga iri rakati raive riine mari yarakakweretesa vanhu nemakambani yaisvika mamimiriyoni makumi manomwe nemasere emadhora, iyo yakanga isiri kubhadharwa.
Bhanga iri rakakweretesa makurukota aive muhurumende yaVaRobert Mugabe, pamwe nenhengo dzedare reparamende.
Chiri kushungurudza vamwe inyaya yekuti vamwe vanhu vasiri kubhadhara zvikwereti ava vakakweretazve kuReserve Bank vakapihwa mari inodarika bhiriyoni imwe chete vakasadzosa ikazonzi ibhadharwe nevanhu vose munyika kuburikidza nemari dzemutero sezvo bhanga guru renyika rakatora chikwereti chacho.
Asi vamwe vane mazita akanyorwa ava vari kuramba vachiti vari kuzorwa mafuta enguve yavasina kudya sezvo vachiti havana kumbokwereta kana kuti vakabhadhara zvikwereti.
Nhengo yedare reparamende yakazvimirira VaTemba Mliswa vanomirira Norton vati mari iri kunzi vakakwereta yezviuru mazana matatu nemakumi mashanu itori shoma pane yavakakwereta.
Asi VaMliswa vati havaone chakaipa kuti munhu akwerete hake mari kubva kubhanga.
Asi vanomirira Buhera South mudare reparamende VaJoseph Chinotimba vati mari iri kunzi vakakwereta inosvika zviuru zana vakaibhadhara kare uye vatumira Studio 7 tsamba kubva kuCBZ.
Vanomirira Nyanga South vari nhengo yeZanu-PF uye vaimbova gurukota rezvehumhizha varamba kuti vane chikwereti chinosvika zviuru mazana mana.
VaMandiwanzira vati havo nyaya yekuti munhu ane chikwereti kubhanga handiyo ingaswera kuzeyiwa munyika muine zvakawanda zviri kuda kugadziriswa.
Senata Edna Madzongwe vaive mutungamiri wedare reSenate vanzi vane chikwereti chinosvika zvuru mazana matanhatu nemakumi mashanu vati ndezvemugotsi matsuro.
Murwiri wehondo yerusununguko VaEndy Mhlanga vati chikwereti chavo chishoma pamari yavari kunzi vakakwereta inosvika zviuru mazana maviri.
Munyori wezvevakarwa hondo yerusununguko muPolitburo yeZanu-PF VaDouglas Mahiya vari kunzi vakatadza kubhadhara mari inosvika zviuru makumi manomwe nemashanu. Asi varamba kuti vane chikwereti ichi.
Studio 7 haina kukwanisa kubata vakuru veCBZ kuti tinzwe divi ravo. Asi gweta, VaTendai Biti vatenda kuti kambani yavo yakapihwa basa rekutevera zvimwe zvikwereti asi vakati havana kusununguka kutaura nezvenyaya iyi.